Nyora Rangu Rangu Rokutsvagisa mu Zimbabwe
Unoda rubatsiro rwehunyanzvi kunyora? Tora bepa remhando yepamusoro kubva pane rakanyanya Nyora Rangu Rangu Rino Nyora mu Zimbabwe yakanyorerwa kumatanho ese edzidzo.
Zvekufunga nezvazvo Usati Wanyora Yangu Yekutsva Pepa
Kana iwe uine basa redzidzo rinoda kunyorwa, saka danho rekutanga nderekutsvaga sevhisi inogona kukubatsira kunyora rako rekutsvaga uye wozvitumira kuti zviongororwe napurofesa wako. Mazhinji masevhisi ezvidzidzo anogona kukupa mienzaniso mizhinji yemapepa akanyorwa nevamwe vanyori, saka zvakakosha kuenzanisa mhedzisiro yemasampuli aya.
Imwe yedzakanakisa nzira dzekuwana sevhisi yekubatsira kunyora rako rekutsvaga pepa kuverenga yavo webhusaiti. Basa rakanaka rekutsvagisa richava nechikwata chakazvipira chevanyori uye neboka revanyori vane hunyanzvi vanogona kunyora bepa rekutsvagisa remhando yepamusoro pane chero nhaurwa. Mupepeti anogona kuve nedzidzo yeyunivhesiti mune imwe ndima yakabatana, uye kazhinji vanozovewo nechero bachelor's degree mune inoenderana ndima. Mupepeti webasa rekutsvagisa ane hunyanzvi uye anofanirwa kukwanisa kupa mienzaniso mizhinji yemapepa akanyorwa nevapepeti vekare.
Mazhinji ekutsvagisa masevhisi anopa ekugadzirisa masevhisi. Iwe unogona kukumbira kuverenga kwekutanga kana kunyora patsva neemail. Kana iwe usina kugutsikana nekugadzirisa kwako, unogona kukumbira wechipiri. Kana mupepeti asingakwanise kuburitsa rakanakisa rekutsvagisa bepa rinogoneka, unogona kuvabvunza kuti vapangire mumwe mupepeti wezvekudzidza nezvebasa racho. Ivo havazokubhadharise iwe kuti uongorore, asi iwe unofanirwa kuvabhadhara ivo kwenguva yavo.
Kana iwe usingakwanise kubhadhara mupepeti kuti anyore pepa rako rekutsvagisa, kuchine dzimwe sarudzo dzekuwana rubatsiro kubva kubazi rekutsvaga. Zvekutsvagisa masevhisi kazhinji vanozvimiririra editors vanoshanda nemakambani ekutsvagisa kana mayunivhesiti kuti vawane zvinyorwa zvakatsikiswa uye mumabhuku ekuverenga Kunyangwe iwo mitengo angave akakwirira pane kubhadharira munhu wega edhisheni mupepeti, pane zvakawanda zvakanakira kushanda nebasa rekutsvaga.
Semuenzaniso, haufanire kunetseka nezvekuti iwe uchabhadhara sei sevhisi, kana kuti sevhisi ine mukurumbira wekuburitsa mashoma ezvinyorwa. Kana sevhisi iri nhengo yeAssociation of Academic Editors (AAE), saka yasangana nemitemo yakasimba yekuti ive chikamu chesangano iri, uye unogona kuva nechokwadi chekuti zvinyorwa zvaunoburitsa hazvirambwe.
Imwe bhenefiti yekushandisa yekutsvagisa sevhisi ndeyekuti iwe unogona kuwana rubatsiro kubva kunzvimbo inoonekwa zvakanyanya. Basa rako rekutsvaga rinogona kukupa mienzaniso yemapepa ekutsvagisa avakagadzira, ayo achakuratidza izvo zvinoshanda nezvisingashande, zvichikubatsira kuona kuti nderipi basa riri nani pane mamwe.
Chekupedzisira, iwe unogona kuwana inopfuura imwe chinyorwa kubva kunzverwa sevhisi. Nekuda kwemhando dzakasiyana dzekunyora uye masosi edzidzo, iwe unogona kazhinji kuwana zvidimbu zvakati zvetsvagiridzo zvakanyorwa muzuva rimwe, zvinoreva kuti hausi kuzosara uchipererwa nemazano.
Paunenge iwe wawana yekutsvagisa basa iwe yaunogona kushandisa yako projekiti, iwe unogona kuwana fungidziro pamutengo nefeksi kana email. Iwe unofanirwa kukumbira makotesheni kubva kumakambani akati wandei usati wabvuma kushandisa yavo sevhisi. Rangarira, zvakadaro, kuti iwe uchazoda kukwanisa kuona masampula ebasa ravo. Mushure mokunge maita izvozvo, munogona kukurukura nezvebasa pamwe chete mobvumirana pamutengo wamunowirirana mose.
Pane zvimwe zvakakanganisika, zvakadaro, pakushandisa rekutsvagisa kunyora rako rekutsvaga pepa. Vamwe vanyori vanogona kuona kuti hunyanzvi hwekugadzirisa huri kushomeka, nekuti havana ruzivo mumunda, kana vanogona kuona kuti kutsvagisa kwacho kwakanyanyisa kana kwakajairwa kuti vakwanise zvido zvavo.
Pamusoro pezvo, bepa rekutsvagisa iro rinogadzirwa uchishandisa basa rekutsvagisa rinogona kusasangana nemitemo yako nguva dzose pane izvo zvinoonekwa segwaro rekutsvagisa rinogamuchirwa. Zvinogona zvakare kunge zvisina kunyatsoita sezvaungade kuti zvive. Nekudaro, vazhinji vanyori vekutsvagira sevhisi vakanaka kwazvo pakugadzirisa uye vanowanzo vhurika kune mazano kubva kune vatengi vavo. izvo zvinofanirwa kuita kuti basa raunogamuchira riite zvirinani.
Nekudaro, kana iwe wagadzirira kunyora rako rekutsvaga, iwe unofanirwa kuyeuka kuzvibvunza iwe pachako kana iro rekutsvagisa sevhisi richakupa iwe nemhedzisiro mhedzisiro, kunyangwe iri yakanakisa kudyara, kana uine ruzivo munzvimbo yekutsvaga kwako, uye kunyangwe iwe uchinzwa kuvimba nehunyanzvi hwavo hwekugadzirisa. Nekudaro, iwe uchave nerubatsiro rwese rwaunoda kuti ubudirire.